Manadihady ny Vexia Zippers Phone 5 | Androidsis
Vexia mitondra antsika hiverina amin'ity taona ity finday avo lenta mahaliana izay dia miavaka amin'ny fakantsary fampiasa sy ny puce octa-core hahafahantsika manipy ny atiny multimédia rehetra tadiavintsika eny amboniny nefa tsy mipipy izy ireo, ankoatry ny fananana efijery IPS 5-inch, RAM 1GB, fitehirizana 8GB ary fiasa mahaliana hafa toy ny fihetsika amin'ny efijery, dualSIM, fampandrenesana maivana, fantsom-pifandraisana. na ny mety hanakalo ny batterie ho an'ny hafa.
Ity iray ity Orinasa Espaniola antsoina hoe Vexia dia ny fahalalana ny fomba hahitana ao amin'ireo terminal Android misy fomba iray hametrahana ny tenany eo amin'ny tsena Espaniôla miaraka amin'ny filokana izay tsy azontsika hadino, toy ny zava-mitranga amin'ny Zippers Phone 5 vaovao. Finday iray azonao vidiana amin'ny € 179.
1 Endri-javatra lehibe
1.1 Octa-core MT6592 puce
1.3 Asehoy sy apetraka antsipiriany
5 Ohatra amin'ny sary nalaina
5.4 Amin'ny tarehin-jiro ambany
Ireo zava-nisongadina tamin'ny Ziper Phone 5 mandalo inona ny CPU MT6592 octa-core-nao 1.7 GHz, fakan-tsary 13 MP aoriana ary fakan-tsary 5MP eo aloha ary efijery IPS 5-inch, tsy manadino ny feony avo lenta izay hita eo ambanin'ny telefaona. Ny sasany amin'ireo antsipiriany ananany dia ny lakilem-batany, izay mahavita manafoana ireo virtoaly amin'ny efijery.
Ny iray amin'ireo teboka mankasitraka an'ity telefaona ity dia ny endrika kanto izay manome anao ny fahatsapana manana telefaona tsara amin'ity lafiny ity amin'ny lamosina plastika. Amin'ny inona ny lakilem-batana ananany dia afaka ampidirintsika ny sensor sensor, ny DualSIM, ny fiasa amin'ny efijery, ny onjam-peo FM na ny fahaizana, araka ny nolazaiko teo aloha, hanakalo ny bateria amin'ny iray hafa.
Octa-core MT6592 puce
Ny CPU iray octa-core 1.7 GHz dia iray amin'ireo singa izay hamela antsika ny tsiro tsara indrindra ao am-bava rehefa mitantana an'ity telefaona Vexia vaovao ity isika, satria ahafahana milalao lalao goavambe sy manipy ny atiny multimedia rehetra. Na dia tsy manana afa-tsy 1 GB RAM miaraka amin'ity puce ity isika, ny tena izy dia manao lalao lavorary izy ireo amin'ny lahasa lehibe izay tsy ananantsika karazana lagy rehefa mijery ny rafitra isika na mandeha eo anelanelan'ny fampiharana. Ity dia azo jerena tsara ao amin'ny videoreview natao ho an'io fotoana io.
Avy amin'ny fakantsary Zippers Phone 5 zavatra tsara ihany no azontsika lazaina Ary na dia tsy manana zavatra tena miavaka aza izy io raha ampitahaintsika amin'ny telefaona hafa, dia mahatratra ny andrasana amin'ny alàlan'ny solomaso 13MP haka sary mahatalanjona ary miditra amin'ny fatra voalanjalanja an'ity smartphone ity ao anatin'ireo singa ao aminy.
Ny fakantsary eo anoloana 5MP dia mamela selfie tsara, ary any aoriana dia mihetsika tsara amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra misy hazavana ampy. Efa fantatray ny fomba Android dia mbola mijaly kely amin'ity lafiny ity amin'ny sary amin'ny toe-javatra maivana. Mazava ho azy, raha ampitahaintsika amin'ny hafa amin'ny telefaona ity singa ity dia miavaka tsy misy isalasalana. Raha tsy izany dia manome ny fahafaha-maka sary izy rehefa mirakitra amin'ny HD feno ary manana maody HDR izay miasa tsara araka ny ahitanao ny fampitahana amin'ny faran'ity fandalinana ity.
Asehoy sy apetraka antsipiriany
Na dia tsy Super AMOLED aza ny efijery, ny IPS HD (1280 x 720) tontonana OGS mahavita tsara amin'ny toe-javatra rehetra misy zoro fahitana ekena.
Ary ny zavatra azontsika ahitàna teboka manan-danja hafa ho an'ity telefaona ity dia ny andiam-pitsopitsony izay mampivondrona ny fahaizany DualSIM, FM Radio, Bluetooth 4.0, fihetsika amin'ny efijery, bateria azo takalo, fampandrenesana maivana na fampiasana karatra microSD hanitatra ireo tahiry anatiny 8GB.
Mahagaga ny fihetsika amin'ny efijery afaka tsindrio ny telefaona amin'ny tsindry indroa, fampiasa iray izay hitanay tamin'ny telefaona maro kokoa ary azonao ampiasaina amin'ity smartphone ity € 179.
Eto aho dia manohy ny nolazaiko teo aloha tamin'ny CPU sy RAM, na dia 1GB aza, dia mihoatra noho ny ampy ny manana lamina ao ambadika maro. mifamadiha eo anelanelan'ny fampiharana haingana nefa tsy misy tara, ary ny core valo an'ny puce dia mitondra tena tsara amin'ny fotoana rehetra.
Amin'ny ankapobeny ny Ny traikefa Android natolotry ny Zippers Phone 5 dia tena tsara. Raha efa fantatsika ny fomba fametrahana launcher tsara toa an'i Nova ao amin'ilay rindrambaiko, dia ho hitantsika ny fandehanan'ny telefaona afaka fotoana fohy.
Ity dia iray amin'ireo lafiny manan-danja indrindra ary tsy azo odian-tsy hita, satria miankina amin'ny fahafahantsika mampiasa ny finday avo lenta amin'ny fomba mahazatra isan'andro. Ity smartphone ity dia mahavita a asa lehibe amin'ny fomba torimaso araka ny hitanao amin'ny sary omena momba ny fanjifana bateria rehefa eo ambanin'ity fanjakana ity izy.
Ankehitriny, raha vantany vao manomboka mampiasa telefaona ianao dia hitombo ny fihinanana satria matetika no mitranga amin'ny terminal hafa misy batterie 2050mAh. Inona no afaka miss dia fomba fitsitsiana herinaratra Azontsika atao ny misafidy raha vantany vao havaozina amin'ny Android 5.0 Lollipop mandritra ny taona.
Ny terminal dia mety manana fitaovana tsara indrindra na fakan-tsary mahatalanjona, fa raha tsy mahasarika ny saina ny endrika taty aoriana dia afaka mijanona ho lasa izy io. Ny telefaona Ziper 5 Izy io dia manana endrika tsara sy kanto izay afaka mitondra fahatsiarovana sasantsasany amin'ny XperiaNa dia misy plastika aza ao ambadika ary inona amin'ny ankapobeny dia manome fahatsapana tsara rehefa eo am-pelatananao izany.
ny Ny fanalahidy ara-batana dia manome tsiro hafa azy amin'ny fanjavonana ireo virtoaly eo amin'ny efijery. Hiankina amin'ny tsiron'ny mpampiasa izany, satria mety ho hitan'ny sasany fa zava-dehibe ny fananana azy ireo toy izao, na dia virtoaly aza ny fironana ankehitriny.
Ohatra amin'ny sary nalaina
Ny sary tany am-boalohany dia nalaina niaraka tamin'ny vahaolana 4160 x 3120 ary lanja 2MB ary efa nampitako azy ireo tamin'ny vahaolana 1600 x 1200 miaraka amin'ny lanja 700kb eo ho eo.
Ireo eo ankavia tsy misy HDR sy ireo eo ankavanana miaraka amin'ny HDR (Range Dynamic avo)
Amin'ny tarehin-jiro ambany
Ny mahay mandanjalanja amin'ny lafiny singa dia mahatratra ny vokatra farany an'ity telefaona ity mahazo isa ambony raha te handefa atiny multimedia isan-karazany izahay amin'ny alàlan'ny efijery sy ny mpandahateny anao. Manolotra traikefa nahafinaritra ihany koa ny feo satria mety hitanao tamin'ny famakafakana video, ary inona ny sarimihetsika, tantara mitohy, mozika na lalao video mahazo ny ampahany tsara indrindra.
Izay lalao tianao rehetra dia handeha amin'ny fomba tsara indrindra azo atao amin'ity telefaona Vexia ity ka aza saro-kenatra ny fametrahana azy ireo amin'ny fifalianao lehibe indrindra.
El Zippers Phone 5 dia telefaona tsara, mendrika ny hahitana azy ireo tsara kokoa noho ny an'i Motorola izay mandray tsara. Ny azonay asongadina dia ny fifandanjana tsara eo amin'ireo singa samihafa sy ny fahafahany manolotra ny fidiran'ny mpampiasa ho amin'ny fanohanana tsara, satria orinasa Espaniola no resahanay momba izany.
Finday misy fakan-tsary tsara, puce octa-core, famolavolana tsara, antsipiriany kely indrindra nefa amin'ny ankapobeny dia miavaka tokoa izy ireo, toy ny radio FM, DualSIM, fihetsika amin'ny efijery, fampandrenesana maivana na bateria azo takalo, izy ireo dia mahavita mitondra ny Android tsara indrindra traikefa ary tsy misy vidiny mihoatra ny € 179 avy amin'ny ivon-toeram-pivarotana toa an'i El Corte Inglés na ny tranokala misy azy. Manapa-kevitra toy ny mahazatra ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Vexia Zippers Phone 5 famerenana: famerenana horonantsary, sary ary horonan-tsary